Tune-Up Projects uye Zvikamu Zvitengi Zvitengesi
LighTwin Madzishe Manual
Aluminum Fishing Boat Dzosa
Aluminum Boat Dzosai
Evinrude naJohnson 1979 uye Kare
ZEPHYR SAIL MASHOKO
Search Site This
Nzvimbo iyi ine zvinangwa zviviri:
Kutanga: Tinosangana-tanga kune vamwe vari kunze kwebhokisi motors. Nzvimbo iyi yakagadzirirwa senzira yekubatsira vamwe kuita zvakafanana nekunyora danho rimwe nerimwe pane zvakanyanyisa kupfuura zvaungawana mubhuku rebasa. Kana iwe uine motokari yakabuda kunze yakafanana neimwe yemapurogiramu edu, iwe unofanirwa kushandisa sendimi kuti ubatsire kugadzira-bhodhi yako yebhokisi motokari.
Chechipiri: Nzvimbo iyi yakashanduka kune zvikamu zvekutengesa. Pfungwa iyi ndeyokuratidza urongwa hwezvikamu zvinowirirana nemotokari yako Johnson / Evinrude / OMC / BRP. Kana iwe ukanyora pa "Motor List" menu link kumusoro, unogona kuwana motokari yako pane urongwa uye ona rutivi rwezvikamu zve motokari yako pamwe neAmazon ne eBay links kuti ikubatsire kuwana chikamu chaunoda uye kuwana mari yakanaka mu iyo nzira.
Nzvimbo iyi yakavambwa makore gumi nemana akapfuura uye yakabatsira zviuru zvevanhu, kubva kumativi ose enyika, kuunza mabhodhi avo ekare ekunze. Kana ndichishanda nematokisi aya, ndinowedzera kuda navo. Sezvo shanduro iyi ichichinja, ndiri kushanda pamishandirapamwe mitsva uye zvinyorwa zvekunakidzwa kwako. Nzvimbo iyi inorarama zvikuru.
Nzvimbo iyi yave yepasi rose. Iwe unogona kushandisa mutauro wemusarudzo uye sarudza kubva mumitauro ye120! Kana iwe ukanyora paAmazon kana eBay link, unotungamirirwa kunzvimbo yakakodzera nzvimbo yako, mari, uye mutauro. Outboard boat motors vanoita sevasina miganhu, zvematongerwo enyika, kana kuti mitauro mitemo uye nzvimbo ino iripo kuti munhu wose afarire.
Ndapota tibatsire kutsigira iyi shanduro nemishandisirwo emangwana kuburikidza uchishandisa mabhizimisi edu ekutenga kana tichitenga chikamu Chinhu chipi nechipi chaunotenga kuburikidza ne Amazon.com search tool chichabatsira kutsigira ino. Amazon.com inogona kukuchengetedza mari nokuti inowanzonyora chikamu chakafanana kubva kune vatengesi vakakwikwidzana. eBay inzvimbo yakanaka yekutsvaga mutengo wekutengesa, uyewo zvisingashamisi uye zvishandiswa zvikamu. Iwe unowanzoona musiyano mukuru pakati pevatengesi kana vatengesi vemutengo, Amazon.com mutengo, uye eBay mutengo. Iwe unogona kuchengetedza mari yakawanda kuburikidza nekubatanidza pamasangano edu. Paunotenga chikamu uchishandisa ma Amazon edu kana eBay links, tinowana nezve 5% commission yatinoshandisa kubhadhara mapurojekiti uye kubhadhara mari inoenderana nesayiti ino. Hakuchina mari yakawedzerwa kwauri kana iwe ukashandisa zvigaro zvedu kutenga zvigadzirwa uye kutsigira iyi site.
Isuwo tinokukoka kuti utarise "Comments" menu yedu yepamusoro pamusoro.
Read more pamusoro pekugamuchirwa kuWatchboard-Boat-Motor-Repair.com
Ndapota chengeta pa EBay or Amazon link above kutibatsira isu kunze. Isu tinogamuchira 4% kana kupfuura mamwe mabasa paZVINHU zvose zvaunotenga kubva kuBay kana Amazon.com mumaawa anotevera e24. Iyi purogiramu yekuwana mari inobatsira ichabatsira purogiramu yemangwana, kugadzirisa, mitauro, SSL kuchengetedzwa, uye nzvimbo yekuvandudza pasina mari yakawedzerwa kwauri. Kutsigira kwako kunofanirwa zvikuru. (The eBay link itsva. Tichaona kana inoshanda.)
Johnson 5.5 HP 4 chikamu chidzorera video
Une chokwadi here kuti une ...
Ndinotenda nekuda kwemhinduro. I ...
Magneto tete markings ......
Magneto micheka yepamusoro yekuisa nzvimbo yepakati uye ndege
Kwete iyo inongopfuurira mberi uye ...
pandakatora chikwata changu chezasi ...
Select LanguageChirunguAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueChiberaruziBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChinese (Chakarerutswa)Chinese (Traditional)ChiCroatianCzechDanishDutchEsperantoEstonianomuPhilippinesFinnishFrenchGalicianrechiGeorgianGermanChiGirikiGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiChiHmongHungaryIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseChiJavaneseKannadaKhmerkoreanLaoLatinwokuLatviaRituniaMacedonianChiMalayMalteseMaoriMarathiMongolianNepaliNorwegianPersianporichaPortuguesePunjabiRomanianRussianChiSebhiyaSlovakSlovenianSomaliSpanishSwahiliSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddishYorubaZulu
Batsira Kutsigira Nzvimbo Ino
International Shoppers Vakagamuchirwa
Chimvari Plug Wire
(2018 iri nyore kushandisa kupfuura 2019)
Muridzi wepaiti ino ndiProud member of AOMCI.ORG
17 maminitsi 43 masekondi apfuura
305185 Fuel Filter ye Glass Glass
10 maawa 58 maminitsi apfuura
0376836 Futa Cap for Glass Fuel Filter
11 maawa 24 maminitsi apfuura
0304607 Kuona kweGoo Fuel Filter
11 maawa 42 maminitsi apfuura
304522 - Mudzidzi weGirazi Fuel Filter
11 maawa 50 maminitsi apfuura
11 maawa 53 maminitsi apfuura
302062 - Futa
Outboard Motor Model Numeri OMC Evinrude / Johnson 1980 - 1999
396514 Carburetor Float uye Arm Assembly
User nhoroondo Menu
Theme kubudikidza Danetsoft uye Danang Probo Sayekti kunofuridzirwa Maksimer